Kitra – « Telma coupe de Madagascar »: resin’ny CFFA ny AS Adema | NewsMada
Fantatra avokoa ireo ekipa efatra hiatrika ny manasa-dalana, hiadiana ny amboaran’i Madagasiakara, taranja baolina kitra «Telma coupe de Madagascar». Tsy anisan’ireo hiatrika izany ny AS Adema, tompondakan’i Madagasikara.
Tontosa, omaly alarobia 28 jolay, ny lalao ampahefa-dalana hiadiana ny amboaran’i Madagasikara, taranja baolina kitra «Telma coupe de Madagascar». Tafita amin’ny dingana manaraka ny CFFA, ny Elgeco Plus, ny Uscafoot, samy avy amin’ny ligin’Analamanga ary ny CS-DFC Vakinankaratra.
Teny amin’ny kianja Elgeco Plus By-Pass, lavon’ny CFFA Andoharanofotsy, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0, ny AS Adema, tompondakan’i Madagasikara. Vokatra tsy noeritreretin’ny mpankafy mihitsy satria noheverina fa hodinganin’ny Adema mora foana ity ekipan’Andoharanofotsy ity. Notoherin’ny mpilalaon’ny CFFA hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ny Adema.
Tamin’ny alalan’ny «pénalty», nodakan’i Rinoh, teo amin’ny minitra faha-6, ny hany baolina tokana tafiditra tamin’ny fihaonan’ny roa tonta. Niezaka nitady irika hanasahalana ny isa ry Onja sy i Aina ary i Fab, saingy tsara rafitra ny fiarovantenan’ny CFFA nahitana an’i Rova sy i Nono. Tsy afa-nanoatra intsony ny Adema satria nilalao 10 teo amin’ny minitra faha-76.
Tamin’ny isa mazava 2 no ho 0 kosa ny nanilihan’ny Elgeco Plus ny Mama FC.
Tany amin’ny kianja Ambohidratrimo, efa tany amin’ny fandakana ny “tirs au but” vao tafavoaka ny CS-DFC nanoloana ny JTM Boeny. Tamin’ny isa 3 no ho 2 ny nisarahan’ny roa tonta. Nisaraka ady sahala 1 sy 1 tao anatin’ny 90 mn sy ny fanalavam-potoana. Nitarika tamin’ny isa ny JTM ary efa tany amin’ny 85 mn vao nanasahala ny CS-DFC, taorian’ny “penalty” azon’izy ireo.
Lavon’ny Uscafoot, tamin’ny isa 2 no ho 0, kosa ny Precisport. Hotanterahina ny alarobia 4 aogositra izao ny manasa-dalana ka Uscafoot, hidona amin’ny CS-DFC ary hifanandrina amin’ny Elgeco Plus kosa ny CFFA.